Sandesh Prawahसोचेकै मितिमा बच्चा कसरी जन्माउने, चरम मज्जा कसरी लिने ? - Sandesh Prawah
सोचेकै मितिमा बच्चा कसरी जन्माउने, चरम मज्जा कसरी लिने ?
काठमाडौं । म एक २८ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मेरो बिहे भएको ३ बर्ष भयो । मेरो श्रीमती र म व्यस्त कार्यतालिकाको कारण हप्तामा एक पटक सम्बन्ध कायम गर्छौं ।
मेरी श्रीमतीलाई लाग्छ कि हामी एकदम कम सम्बन्ध कायम गरिरहेका छौं । अब उनी गर्भधारण गर्न चाहान्छिन्, यो विषयमा हामीहरु धेरै बहस गर्छौं ।
कृपया मलाई भन्नुहोस् हप्तामा कति पटक सम्बन्ध राख्नुपर्छ ? यसको सामान्य मापदण्ड के हो ?
विस्तारै एक अर्कासँग समर्पित भएर एक अर्कालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार गर्नुहोस् ताकि तपाईं त्यसको भरपुर आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । थप प्रक्रियाको धेरै महत्त्वपूर्ण छ । मायालु शब्दहरु र स्पर्शबाट तपाईं पूर्णतया सम्बन्धका लागी आफ्नो साथीलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ भनि जनबोली मा लेखिएको छ ।